OwoKhozi uqophe nabakacothoza - Ilanga News
Home Izindaba OwoKhozi uqophe nabakacothoza
OwoKhozi uqophe nabakacothoza
UMdonso uthi lokhu kuwumlando kwabesifazane
uDkt Victor Mkhize weColenso Abafana beNkokhelo nomsakazi
woKhozi FM uNonhlanhla “Mdonso” Ngcobo-Pottier beqopha.
UYAPHUPHUMA yinjabulo umsakazi woKhozi FM ngokunikwa ingqayizivele yethuba lokuqopha neqembu lesicathamiya elibalwa namakhulu eNingizimu Afrika. UNonhlanhla “Mdonso” Ngcobo-Pottier uqophe izingoma neColenso Abafana Benkokhelo, osekunesikhathi liyibambile kucothoza.
UMdonso utshele ILANGA ukuthi ukusebenza kwakhe naleli qembu kuveze isithombe sokuthi abesifazane bangangena bagxile kulolu hlobo lomculo. Uthi abesifazane bayalidinga ithuba ezintweni ezinhle, iphele le ndaba yokuthi bahlukunyezwe, babulawe.
“Umculo wesintu ungaphakathi kimina kusukela ngisemncane. Yayilalelwa kakhulu iColenso ngesikhathi ngisakhula ekhaya, ngangingazitsheli ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngicule nayo. Kuthe uma kufika umholi wayo enginika leli thuba, ngabona kungcono ukulemukela ngezandla ngoba kuwumlando kimina nakwabesifazane nje bebonke ukucula naleli qembu,” kusho uMdonso.
Uthi baqophe izingoma ezimbili ezinephimbo lakhe okungethi, “Izinto Zabantu” nethi “Umfanomemezayo”. Uveze nokuthi i-albhamu egcwele yaleli qembu izophuma ngenyanga ezayo kanti isihloko sayo sithi “Impolompolo”.
Umholi weColenso, uDkt Victor Mkhize, uthe ukusondeza lo msakazi ukwenze njengengxenye yeqembu ukubungaza abesifazane kule nyanga yabo. Uthi baningi abantu abanamakhono ahlukene akholwa wukuthi kumele banikwe ithuba.
“Lo mntwana sihlangane naye nyakenye, wangitshela ngothando lomculo wesicathamiya nokuthi iColenso yayilalelwa kakhulu kubo, bakhule ngayo, ngakho-ke unesifiso sokuthi lingapheli leli qembu ngoba lisabambe iqhaza elikhulu kucothoza. Ngibone ukuthi mangisebenze naye afake iphimbo lakhe, okuyindlela yokubonga imbokodo ethanda esikwenzayo,” kusho uDkt Mkhize.
I-Colenso yasungulwa eminyakeni yo-1970, seyibuya emazweni okubalwa kuwona iNamibia, i-Italy, iFrance neJapan.
Previous articleUkhwantalala i-Orlando Pirates idliwa
Next articleIsibindi simenze wayivulandlela kozakwabo